Fitsenana ny Kardinaly TSARAHAZA Désiré teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato . – Sénat de Madagascar
July 11, 2018 RAMBELO Abel NIRINA
Ny talata 10 jolay 2018 tamin’ny 3 ora tolak’andro no nigadona teto an-tanindrazana ny Kardinaly Tsarahaza Désiré, rehefa voahositry ny Pape François eo amin’ny andraikitra maha Kardinaly azy.
Mpino Kristianina , Eveka sy Relijiosy ary olom-panjakana maro notarihin’ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA, notronin’ ireo Loholon’i Madagasikara notarihin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO mivady no tonga nitsena sy nanome voninahitra azy teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato .
Ny andron’ny Pantekôty lasa teo no notendren’ny Pape François ireo Kardinaly 14 vaovao ka tao anatin’izany ny Kardinalin’i Madagasikara Tsarahaza Désiré izay Archevêque avy any Toamasina. Izy moa no Kardinaly faha efatra Malagasy rehefa banga izany toerana izany nandritra ny 8 taona.
Nandritra ny kabarin’ny Filoham-pirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA no nanamafisiny fa betsaka ny asa miandry ity Kardinaly vaovao ity ary mitondra fahasoavana hoan’ny firenena izao fanendrena azy izao .
Nohamafisin’ny Kardinaly vaovao kosa nandritran’ny nandraisany fiitenenana ny hafaliana tamin’izao fomba manetriketrika nandraisana azy izao ary nanehoany fa izao fanendrena azy izao dia maneho fa manana ny toerana lehibe i Madagasikara eo anivon’ny fiangonana sy izao tontolo izao. Ary manentana ny Malagasy ihany koa izy mba hiady amin’ny ratsy ary tsy hikely soroka amin’ny fanaovana ny tsara io no teny filamatra nosafidiany.